USolwazi Maart uthe: ‘Ave emancane amanyuvesi emhlabeni analezi zikhundla zezifundiswa, kanti ngenxa yalokho asivamile ukuzwa ngazo. Kuyinto enkulu kimi ngempela. Lokhu kuwukuhlonipha igalelo lami emisebenzini eminingi yocwaningo engiyenzile ezingeni lomhlaba, negalelo lami ngezithangami nezigcawu engizenze e-University of Bremen.’
Njengenxusa locwaningo leminyaka emihlanu ezayo, uMaart uzoqhakambisa i-University of Bremen e-UKZN nasesifundeni sase-Afrika eseningizimu. Uzohlela imicimbi yalamanyuvesi womabili, ahlanganise abacwaningi ukuthi basizane ngezinto zokusebenza, afake nezitshudeni ezenza iziqu eziphakeme, ahlele izithangami zocwaningo phakathi kwezikhungo zombili.
Uthe: ‘Lokhu kusho ukuthi kudingeka ngihlele kahle abacwaningi abakhona phakathi kwalezi zikhungo zombili, ngithuthukise ukubambisana kwezocwaningo. Ukubambisana kuyingxenye yamanyuvesi womabili ekuthuthukiseni ezemfundo, okubalwa nokushicilelwa kwamabhuku kukho. Okunye wukuthi kumqoka ukuqhakambisa igama le-UKZN kanti lokhu, njengomuntu owayesebenza e-UKZN, wumsebenzi wami engiwenzayyo nothakaselwayo.’
UMaart unejoka lokuqinisa amaxhama okuxhumana phakathi kwe-UKZN ne-Bremen.
UMaart wazalelwa e-District Six, e-Cape Town, wakhulela khona ngaphambi kokuba basuswe ngenkani neminye imindeni ecela enkulungwaneni eyasuswa wuhulumeni wobandlululo ngasekuqaleni kweminyaka yama-1970.
Ibanga leshumi walenza e-Steenberg High School, wabe esedlulela phambili ukuyokwenza iziqu zakhe e-University of the Western Cape e-Cape Town, lapho azuza khona iziqu ze-Master’s e- University of York eNgilandi neziqu zobudokotela e-Centre for Contemporary Cultural Studies e-University of Birmingham e-United Kingdom.
Phakathi kwezinto azizuzile kubalwa ukuqokwa kwakhe ngonyaka wezi-1987 eqokelwa ukuba ngoweSifazane oVelele ngenxa yokuba ngowokuqala ukuqala inhlangano elwela amalungelo abantu besifazane abamnyama eNingizimu Afrika, i-Women Against Repression.
Washicilela incwadi yakhe yokuqala eneminyaka engama-27 e-Toronto, e-Canada, kwathi eminyakeni emithathu elandelayo wahlabana ngomklomelo i-The Journey Prize: Best Short Fiction e-Canada.
UMaart unezincwadi ezintathu nezinye eziningi emgodleni alungiselela ukuzishicilela. Uthi: ‘Zonke izincwadi esengike ngazibhala ziklonyelisiwe, zadla ubhedu ezindaweni ezehlukene emhlabeni.’
UMaart useke wasebenzisana nezinjululwazi kwi-UNESCO, bakhiqiza incwadi yokuqala i-South-South Philosophy ngonyaka wama-2014. Umsebenzi wakhe omningi ugxile ekuzigqajeni ngobumnyama, ukuhlaziywa kwezomqondo nomkhakha we-Philosophy obizwa nge-Derrida and deconstruction.
Ngonyaka wama-2016, wathola umklomelo wokuba yisithwalandwe kwezenjululwazi i-William R Jones eklonyeliswa yinhlangano i-Philosophy Born of Struggle.
UMaart ubhala izincwadi azisusela ekhanda kanti ukubhala kuyimpilo kuye. ‘Akubuzwa ukuthi ubulili nobuhlanga kuseqhulwini kuwo wonke umsebenzi wami,’ kusho yena.
Umbhali: nguMelissa Mungroo